Tag: qoraalka barroosinka | Martech Zone
Tag: qoraalka barroosinka
Hay'adaha: Jooji Cunitaankaaga ee Xiriirkaaga
Sabti, Sebtember 4, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Wakaaladaha iyo naqshadeeyayaasha ayaa sida caadiga ah ku dadaala inay ku darsadaan awooddooda halka ay ku yaalliin boggaga iyo codsiyada ay dhisaan, laakiin waxaan la yaabanahay inta badan ee aan ka faa'iideysan fursaddaas si ay u helaan darajooyinka mashiinka raadinta. Markii aan u sharaxo ku habboonaynta mashiinka raadinta iyo darajaynta dadka waaweyn, waxaan si caadi ah ugu sharraxaa sidan: Bog-furaha Keyword ee bogga - adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah ee boggaaga ayaa siinaya farriin cad oo ku saabsan matoorada raadinta ee ku saabsan ereyada
Raadinta makiinadaha raadinta bogagga leh algorithms adag oo miisaankoodu yahay tan oo isbeddello kala duwan ah, labadaba gudaha iyo dibedda boggaaga. Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la aqoonsado waxyaabaha muhiimka ah ee Mashiinnada Raadintu ay fiiro gaar ah u leeyihiin, in kastoo. Intooda badani waa cunsurro aad si buuxda gacanta ugu hayso marka aad qorsheyneyso ama aad qorsheyneyso bartaada ama aad si fudud u qoreyso boggaaga. Tani waa iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay bog internet ah oo ah buug-yaraha suuq-geynta, baloog, ama wax uun